Soosaarista iyo Soo-saaraha Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Quudinta ee Quudinta Xoolaha 5-50KG ee ugu Fiican | GAOGE
Automatic 5-50KG Xayawaanka Quudinta Xayawaanka Quudinta Mashiinka Xirmooyinka Granule
Mashiinka Mashiinka Waxsoosaarka Qalabka Cunnada ee Cunnada Animal Automation Feed waxaa loo isticmaalaa miisam si otomaatig ah iyo baakidh loogu talagalay maadada granule-ka ee ku jirta bac weyn oo ka socota 10kg ilaa 50kg
Mashiinka Xirmada Cunnada ee Xayawaanka Quudinta
Haddii ay jiraan wax soo saar “dhaqameed” ku jira taariikhda dheer iyo guusha ee shirkadda GAOGEPAK, taasi waa hubaal in ay tahay quudinta xoolaha; Xaqiiq ahaan, khadadkayaga baakadaha ayaa lasocday koritaanka iyo horumarka waxsoosaarka waxsoosaarka aagayaga marka hore, ka dib talyaaniga iyo maalmahan aduunka oo dhan, hagaajinta iyo casriyeynta khadadka shandadaha oo had iyo jeer ilaalinayna tayada wehelkeena safarka.
Pellets, mash, bran, granules, jajabi, la jajabiyey, sheygan noocyadiisa kala duwan waxaa qiyaasaya miisaankayaga suuban, Gross / N ama Net / N iyadoo kuxiran awooda la codsaday kadibna la galiyay mashiinkeena si buuxda u shaqeynaya ee IGF. awood u leh inuu ku shaqeeyo warqad, polypropylene-ka tolmo wanaagsan iyo boorsooyinka PE-ga oo u dhexeeya 5 ilaa 50 kg oo gaarayo awood dhan ilaa 1200 jawaano / saac. Quudinta xoolaha, nidaamka xiritaanka caadiga ah ayaa lagu tolan doonaa.
Automatic 5-50KG Animal Feed Pet Feed Granule Mashiinka Xirxirida wuxuu si qaas ah ugu haboon yahay xirxirida waxsoosaarka granule 5-25KG sida bariiska, hadhuudhka, badarka, digirta, quudinta, sonkorta, abuurka, bacriminta iwm bac horay loo sameeyay.
Automatic 5-50KG Xayawaanka Quudinta Xayawaanka Quudinta Mashiinka Xirmooyinka Granule waxaa loo isticmaalaa miisaanka otomaatiga ah iyo xirxirida walxaha granule-ka ee ku jira bac weyn laga bilaabo 10kg ilaa 50kg. Mashiinka baakadka quudinta xayawaanka wuxuu ka kooban yahay silo maaddada, miisaanka dhijitaalka ah, qeybta keenista boorsada, buuxinta qeybta wax lagu rakibo, nidaamka gudbinta iyo nidaamka tolidda dharka. Waxaa soo diyaarisay shirkadeena si loo xaliyo dhibaatooyinka shaqaalaha yar ee la heli karo, kharashka shaqada oo sareeya iyo tayada shaqada oo aan degganeyn oo loogu talagalay walxaha granule ee looga baahan yahay xirmooyinka bacda waaweyn. Waxaan sidoo kale bixinnaa miisaanka hubiyaha xiga iyo nidaamka palugga ee aaladaha.
Qaabeynta qaabdhismeedka: silo maadadeed, miisaanka dhijitaalka ah, nidaamka bixinta kiishka, nidaamka xirxirashada, habka gudbinta iyo nidaamka tolidda
1 Mashiinka si fudud ayaa loo shaqeeyaa oo xasilan yahay sababtoo ah wuxuu qaatay Siemens PLC iyo 10 inch taabashada midabka taabashada qaybta xakamaynta.
2 Qaybta Pneumatic waxay qaadataa Festo solenoid, kala-soocaha biyaha, iyo dhululubo.
3 Nidaamka faakiyuumku wuxuu qaataa Festo solenoid, shaandhada, iyo badhanka cadaadiska faakiyuumka dijitaalka ah.
4 Bedelaha magnetic-ka iyo biraha koronto-dhaliyaha waxaa lagu bixiyaa farsamooyin kasta oo dhaqdhaqaaq ah, oo ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo.
1 Nidaamka boorsada soo qaadista otomaatiga ah: Si otomatig ah u soo qaado bacda diyaarsan.
2 Boorsada furitaanka, isku haynta, haynta habka bacda: Si otomatig ah u fur, u qabo oo hagaaji bacda.
3 Bacda Hging iyo habka gudbinta: Bacda Hug iyo bacda gudbinta.
4 Bacda tolida: Bacda gudbinta otomaatiga ah iyo tolida otomaatiga ah (bacda tolida)
5 Qaybta xakamaynta korantada: Si buuxda u xakamee cutubka baakadka oo dhan.
Hore: Automatic 20-50kg Macdanta Bag Bag Granule Bag Machine Bag
Xiga: Mashiinka Granule Caaga ah Mashiinka Bacda-Furan ee Furan
Mashiinka Mashiinka Xirmada Bag Bacda Weyn
Qashinka Bisadda Mashiinka Bacda Si otomaatig ah
Mashiinka Sand xirxirida Machine Open-afka Bag B ...